လေနုအေး: Lets Make Our World The Most Beautiful Home
Posted by တန်ခူး at 9:23 PM
လူတွေရပ်တည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ လူတွေရဲ့ လောဘ ဒေါသ မာန်မာနတွေကြောင့် တငြီးငြီးတောက်လောင်နေရတယ်။ တီထွင်မှုတွေ အင်အားကြီး စွမ်းအင်တွေကို ပိုသာယာလာမယ့် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေအတွက်ပဲ အသုံးချကြရင် ကောင်းမှာလေ။ ကမ္ဘာမြေကို အချစ်တွေနဲ့သာ စိမ်းလန်းစေမှာပါ။ လူအချင်းချင်းကြား ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ထုံမွှမ်းတဲ့အခါ သနားညှာတာစိတ် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် တာဝန်ယူလိုစိတ် အသိတရားတွေနဲ့ နာဖျားနေတဲ့ ကမ္ဘာကို ကုစားလာနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ထင်မိတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုလေးနဲ့ တင်ပြတာ..
ကမ္ဘာကြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ..
အင်း... ဒါက တန်ခူးရဲ့ နယူး ဗားရှင်းပေါ့နော်... မိုက်တယ်...။ ကျေးဇူးပါ တန်ခူး...
ကမ္ဘာကြီး ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကိုယ်တို့အားလုံး နဲနဲချင်းစီ ကြိုးစားကြရမယ် ထင်ပါတယ်... တယောက်အားဖြင့် ယူသော် မရ...
တသောင်းအားဖြင့် ယူသော် ရ၏ ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်...။
Save the Earth...!!!
** တန်ခူးက အရေးဆို တံခါးကြားထဲဝင် ပုန်းရဲပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ ဟိုသတ္တဝါကိုကြောက်လို့ ဝင်မပုန်းရဲဘူး.. သူတို့က အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ နေလေ့ရှိကြတာ မဟုတ်လား... :D
မတန်ခူးပို့စ် ဖတ်ပြီးမှ နဲနဲ အကြောက်ပြေသွားတယ်... အလုပ်ထဲက လူတွေကို ပြောပြမိသေးတယ် သူတို့ကတော့ ကြောက်တဲ့ ပုံ မပြဘူး အမရေ
တန်ခူးဗားရှင်း ကို လိုက်နာသော အားဖြင့်
အဲကွန်းလည်း မဖွင့်ပါဘူး။ တို့တွေက tropical climateနဲ့ နေသားတကျ။ Recycle လုပ်တာကတော့ အိမ်တောင် ကလန်ကူလိ အိမ်နဲ့တူနေပြီ။
စွမ်းအင် ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ ဟင်းတောင် တခွက်ပဲချက်တယ်းD
အမရေ.. “အာဂသတ္တိဒေါ်တန်ခူး” ဆိုလို့ ရီချင်တယ်.. အတူတူပဲ အမ.. ကျနော်လည်း ကြောက်တတ်တယ်.. သရဲကား သွေးပျက်ထိန့်လန့်စရာကောင်းတဲ့ကား ဘာမှ မကြည့်ဘူး.. ဟာသကားပဲကြည့်တယ်.. နဂိုကမှ မှောင်ရင် အိပ်ခန်းနဲ့ မီးဖိုခန်းတောင် မကူးရဲဘူး.. :D
"Lets Make Our World The Most Beautiful Home." :)